४१ वर्षपछि आमा छोराको भेट ः गाउँभरि खुशीयाली – Pokhara Hotline News
४१ वर्षपछि आमा छोराको भेट ः गाउँभरि खुशीयाली
By Pokhara Hotline	 On २०७७ चैत्र ९ गते सोमबार १२:४७
८ चैत, इलाम । इलामको माई नगरपालिका–१०, लुम्बाकमा आइतबार दिउँसो बेग्लै उल्लास थियो । गाउँभरिका मानिस घिमिरे गोलाइमुन्तिर लामबद्ध भएर बसेका थिए ।
उनीहरुको सबैको चासो थियो, ४१ वर्षअघि हराएका दुर्गाप्रसाद तिम्सिना (दीपक जैसी) कस्ता भएछन् ?
छोरालाई देख्ने वित्तिकै चिन्नुभयो त ?’ पत्रकारको प्रश्न भईँमा खस्न नपाउँदै उनी हाँस्दै बोलिन्, ‘सुरुमा त झण्डै चिनिन पो ! फोक्से मासु लागेर विग्रिएछ ।’
‘के सोध्नु र ! बोल्न त सक्दो रहेनछ’, आमा धनमायाले पत्रकार सँग भनेकी छन् ।
तर उनको मानमस्तिस्कमा छोरा १९ वर्षको छँदा एकतप्पाबाट हिँडेको चार दशक पहिलेको हरेक क्षण ताजै छ । ‘तोरी टिपेर बेच्न मंगलबारे जान्छु भनेर हिँडेको थियो’, उनले सुनाइन्, ‘खै.. २०–२५ रुपैयाँ पाएछ, त्यही लिएर कहाँ गयो, गयो ।’
‘जाहेरीबाहेक उनीविरुद्ध कुनै प्रमाण छैन’, शर्माले भनेका छन् ‘त्यसपछि हत्या भएको भन्ने पक्षबाट कुनै फलोअप पनि छैन र घटनाको मुचुल्का पनि देखिँदैन ।’ प्रहरी अनुसन्धानबाट प्रमाणित हुने कुनै आधार भेट्टाएन । तर अदालतले दुर्गाप्रसादलाई मानिसक रुपमा कमजोर करार गरिदिएको उनको दाबी छ ।
धनमायामा अनुसार उनलाई एक दिन छोरा आउँछ भन्ने लाग्थ्यो । तर कुनै अत्तोपत्तो थिएन । ‘पोहोर दार्जिलिङमा रहेको थाहा पाएपछि झन धेरै आश लाग्यो’ उनले सुनाइन् ।छोरा वेपत्ता भएको केही वर्षपछि धनमाया पनि आफन्त केदारनाथ बसेकाले लुम्बाकतिर बसाइँ सरेकी थिइन् । दुर्गाप्रसाद आइतबार त्यही पुगेका छन् ।
‘विभिन्न सरकारी अस्पतालमा कुरा गर्नुपर्ला, नभए सहयोगीहरु पनि खोज्नुपर्ला’, आफन्त धिरेन्द्रले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब पहिलो प्राथमिकता उपचार नै हो ।’उनको मुद्दा पनि टुंगिएको छैन । दुर्गाप्रसादको पक्षमा बहस गरेका उच्च अदालत, कोलकाताका वकिल हिरक सिन्हा उनीमाथि लागेको आरोपको विषयमा फैसला भइनसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सोमबार फेरि सुनुवाइ हुँदैछ, उनीमाथि लागेको अभियोगको छिनोफानो हुन अझै समय लाग्छ ।’अधिकांश समय मौन रहने दुर्गाप्रसादको मुखबाट बेलाबेला दुई÷चार शब्द निस्किन्थ्यो । छेऊमा आएका आफन्तले सामान्य परिचय दिएपछि उनले मुन्टो हल्लाउँथे, चिनेको संकेत दिन्थे ।
अदालतमा पेश गरिएको उनको मानिसक स्वास्थ्य जाँचको रिपोर्टले पनि दुर्गाप्रसाद ९÷१० वर्षको बच्चाको जस्तो हालतमा रहेको देखाएको छ ।
तर परिवारका सदस्यहरुले भने लामो समय जेलमा बसेका उनी डराएको हुनसक्ने बताउँछन् । आइतबार साँझसम्मको उनको हाउभाउ हेर्दा भने उनी विस्तारै खुल्दै गएको देखिन्थे । साँझतिर उनी आफैं आँगनमा निस्किए र हात खुट्टा धोए । त्यसपछि कोठातिर लागे । अनलाइन खबर बाट साभार